အတတ်ပညာ တရုတ်သိုးမွှေးထိုးစက်ထိန်းချုပ်မှု Panel ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ |Morton စက်ယန္တရား
ချည်ထိုးစက်ထိန်းချုပ်မှု panel ၏ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကိုရှာဖွေနေပါသလား။
အလွယ်တကူလည်ပတ်နိုင်သော Knitting Machine Panel Board ကို ဤနေရာတွင် ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
Exwork ဈေးနှုန်း- တစ်ပုံလျှင် USD 100-200
အနည်းဆုံးမှာယူမှုအရေအတွက်- 1 pcs
ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်: တစ်နှစ်လျှင် 35000 အစုံ
1. စက်ဝိုင်းချည်ထိုးစက်အတွက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော အီလက်ထရွန်းနစ်အစိတ်အပိုင်းများ။
2. ဤနယ်ပယ်တွင် အနှစ် 20 ထက်ပို၍ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှု။
Morton ဘက်စုံသုံး မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ ချည်ထိုးကိရိယာ။ ၎င်းသည် အထူးဒွိဟသတ်မှတ်ထားသော မိုက်ခရို-စီမံပြုလုပ်ထားသော ချည်ထိုးကွန်ထရိုသည် ချည်ထိုးစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်နှစ်တာအတွေ့အကြုံ၏ ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စျေးကွက်တွင် အဆင့်မြင့်ဆုံးနှင့် အတည်ငြိမ်ဆုံး မိုက်ခရိုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ချည်ထိုးကွန်ထရိုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ micro-processed knitting controller သည် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တစ်ခုတည်းသော မူပိုင်ခွင့်များပါရှိသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲပရိုဂရမ်၏ ကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်- ပုံမှန်မဟုတ်သော အနှောင့်အယှက်များကြောင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာအား ပိတ်ခြင်းမှ တားဆီးပေးနိုင်ပါသည်။
ဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများ၏ ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်မှု- အီလက်ထရွန်းနစ်အစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရသည့် ပုံမှန်မဟုတ်သော အချက်ပြမှုများ ဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်နိုင်သည်။
မိုးကြိုးပစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သော ဗို့အားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ထိန်းချုပ်ကိရိယာအား ပျက်စီးမှုမှန်သမျှကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ဆိုးရွားသောပတ်ဝန်းကျင်အောက်တွင်ပင် ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်သည်။
ထိန်းချုပ်မှုဘောင်ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ချိန်ညှိနိုင်သည်- လည်ပတ်မှု- H:0 60 ကဏ္ဍအလိုက် ချိန်ညှိမှု။Inching: L:0 60 ကဏ္ဍအလိုက် ချိန်ညှိမှု။
စက်ပလပ်ဖောင်း၏ ချောမွေ့သော အနေအထား ရပ်တန့်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်
အနေအထားရပ်တန့်နေစဉ်အတွင်း၊ တုန်ခါမှုကွဲအက်ခြင်းဖြစ်စဉ်သည် စက်ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်မည်မဟုတ်ပါ။
အမျိုးမျိုးသော အစိတ်အပိုင်းများ၏ ထိန်းချုပ်မှုဘောင်၏ လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များအား ကြည့်ရှုခြင်း-
1. အလင်းညွှန်ပြသော ထိပ်ချည်ကွဲအက်ခြင်း။
6.Air abnormal indivator
ယခင်- သိုးမွှေးထိုးစက် ဖုန်မှုန့်
နောက်တစ်ခု: သိုးမွှေးထိုးစက် Rolling Takedown စနစ်
မြို့ပတ်သိုးမွှေးထိုးစက်အတွက် အရည်အသွေးမြင့် ထိန်းချုပ်ဘုတ်
သိုးမွှေးထိုးစက် Rolling Takedown စနစ်
ချည်ထိုးစက် လေဂွန်နှင့် ပိုက်